ဘေးမှဝင်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ အစ္စလာမ်က ကျွန်ုပ်တို့ကို သင်ကြားပေးနိုင်သည် - Global Campaign for Peace Education
နိုဝင်ဘာလ 28, 2021 သတင်းနှင့်အထူးများ 0
New York၊ Flushing ရှိ ရပ်ရွာကို ကာကွယ်ရန် Main Street Patrol မှ ကင်းလှည့်သူများသည် လမ်းမပေါ်ထွက်ကြသည်။ (ဓာတ်ပုံ- Instagram/ Main Street Patrol)
(မှပြန်လည်တင် အကြမ်းမဖက်ရေးလှုပ်ရှားမှု၊ မေ ၂၁၊ ၂၀၂၁)
မွတ်စ်လင်မ်ဥပုသ်လ၏ ရမ်ဇာန်လအတွင်း (မွတ်စလင်များက ဆင်ခြင်သုံးသပ်ရန် အကောင်းဆုံးလဟု နားလည်ကြပြီး အပြုသဘောဆောင်သော အပြောင်းအလဲများကို ပြဋ္ဌာန်းခြင်း) တွင် အာရှသားများအပေါ် အမုန်းပွားစေသော ရာဇ၀တ်မှုများတွင် ကျွန်ုပ်၏ အာရုံစူးစိုက်မှုကို ခံခဲ့ရပါသည်။ မှတ်သားထားသည့်အတိုင်း New York Times ကို ဧပြီလအစောပိုင်းတွင်၊ 110 ခုနှစ် မတ်လမှစတင်၍ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင် အာရှဆန့်ကျင်ရေးမုန်းတီးရေးရာဇ၀တ်မှုများ ပြောင်ပြောင်တင်းတင်း တင်းတင်းကျပ်ကျပ် တိုင်ကြားထားသော အမှုပေါင်း 2020 ကျော်ရှိခဲ့ပြီး၊ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် နှုတ်ဖြင့်စော်ကားခြင်းမှသည် ဖျက်ဆီးမှုအထိပါ ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ မွတ်ဆလင်နှင့်အာရှနှစ်ခုလုံးအနေဖြင့် ကျွန်ုပ်သည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင် ပျံ့နှံ့နေသော Islamophobia ကို တန်ပြန်ခြင်းနည်းလမ်းအဖြစ် ကျွန်ုပ်၏ယုံကြည်ခြင်းယဉ်ကျေးမှုမှ အလွဲသုံးစားလုပ်ထားသောအသုံးအနှုန်းများကို တစ်ပြိုင်နက်တည်း ပြန်လည်ရယူရန် ကြိုးစားနေစဉ်တွင် ဤကမ္ဘာ့လမ်းကြောင်းများကို စောင့်ကြည့်နေပါသည်။
အာရှမုန်းတီးရေးနှင့် အစ္စလာမ်မုန်းတီးရေး ဆန့်ကျင်ရေး နှင့် အစ္စလာမ်မုန်းတီးရေး ဝါဒ သည် လူဖြူ ထိပ်တန်း ရာထူး နှင့် အခြားသော ဖိနှိပ်မှု စနစ် များ ကို တည်ဆောက် ပြီး တိုးပွား လာ သည့် ပေါ် ပေါက်လာ သည် ။ ဤအကြောင်းအရာကို စိတ်ထဲမှာစွဲမှတ်ထားပြီး၊ အမုန်းတရားများကို ဆန့်ကျင်ခြင်းနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးတည်ဆောက်ခြင်းတွင် လူတစ်ဦးချင်းစီ၏အခန်းကဏ္ဍကို ပိုမိုကောင်းမွန်စွာနားလည်ရန် ကျွန်ုပ်၏ဘာသာရေးဓလေ့ထုံးတမ်းများမှ သင်ခန်းစာများရှိပါသည်။
နောက်ဆုံးတွင် အခြားသူများလုပ်သောအရာသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ထိန်းချုပ်မှုမှလွဲ၍ ကျန်ရှိနေနိုင်သော်လည်း ကျွန်ုပ်တို့တုံ့ပြန်ရန်ရွေးချယ်ပုံမှာ ကျွန်ုပ်တို့၏စွမ်းရည်တွင် အလွန်ကောင်းမွန်ပါသည်။
"ဂျီဟတ်" သည် အလွန်အသုံးများသော စကားလုံးဖြစ်သည်။ အနောက်မီဒီယာအလွဲသုံးစားလုပ်ထားသော၊ အဓိပ္ပါယ်မဲ့စွာ ခေါ်ဝေါ်ခြင်း၏ အနှစ်သာရမှ ဖယ်ထုတ်ထားသော၊ သန့်ရှင်းသောစစ်ပွဲအချို့အပြင်၊ ဂျီဟဒ်သည် အကြမ်းဖက်မှုမရှိဘဲ ပဋိပက္ခများကို (ပြန်လည်) ဖြေရှင်းခြင်းလုပ်ရပ်အဖြစ် နားလည်နိုင်သည်။ ဂျီဟတ်ဟူသော ဝေါဟာရသည် "ရုန်းကန်ခြင်း" သို့မဟုတ် "ကြိုးပမ်းအားထုတ်ခြင်း" ဟူ၍ တိုက်ရိုက်ဘာသာပြန်ဆိုထားပြီး ယင်းသည် မိမိကိုယ်ကို တာဝန်ခံမှုနှင့် တိုးတက်စေသည့် နေ့စဉ်အလေ့အထဖြစ်ပြီး ဒုစရိုက်ဘဝတွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခြင်းမပြုပေ။ ကောင်းမှု၌ တွယ်တာခြင်း နှင့် မကောင်းမှုကို တားမြစ်ခြင်း ဖြစ်၏။ ဘယ်အရာက ကောင်းသည်ဖြစ်စေ ဆိုးသည်ဖြစ်စေ ကျင့်ဝတ်သည် ငြင်းခုံရန်ဖြစ်သည် — ကျွန်ုပ်တို့အများစုမှာ မည်သည့်ကောင်းမှု သို့မဟုတ် လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုမှ ထွက်လာသည်ဟူ၍ သဘောမတူကြသော်လည်း၊ အကောင်းကို စွဲကိုင်ပြီး မကောင်းမှုကို တားမြစ်ရန် လိုက်ရှာခြင်းသည် ဂျီဟတ်သည် “ဘေးမှဝင်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်း” နှင့် မည်သို့ဆက်စပ်သနည်း။
ဘေးမှဝင်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်းသည် လူတိုင်းတွင် တာဝန်ရှိပြီး တွေးခေါ်တတ်ရန် နှိုးဆော်ချက်တစ်ခုဖြစ်ပြီး မတရားမှု—သို့မဟုတ် အမျိုးမျိုးသော နှောင့်ယှက်မှုနှင့်/သို့မဟုတ် အကြမ်းဖက်မှုများ—ဖြစ်ပေါ်နေချိန်တွင် အခြေအနေကို ဝင်ရောက်စွက်ဖက်ရန်နှင့် တိုးမြင့်လာစေရန် နှောင့်ယှက်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ သတိပြုစရာ အနည်းငယ်ရှိပါသည်။ နှောင့်ယှက်ခံရသူသည် သင့်အကူအညီ လိုအပ်ခြင်း ရှိ၊ မရှိ မေးမြန်းရန် အမြဲတမ်းကောင်းပြီး၊ ကြားဝင်ဆောင်ရွက်ပေးနေချိန်တွင် သင့်လုံခြုံရေးအတွက် စိုးရိမ်ပါက အနီးနားရှိ အခြားသူများထံမှ အကူအညီတောင်းခံကြည့်ပါ။
Hollaback!နည်းမျိုးစုံဖြင့် နှောင့်ယှက်မှုများကို အဆုံးသတ်ရန် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ပလပ်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်သည့် လူကြိုက်များသော ကြားဝင်နည်းလမ်းငါးခုကို တီထွင်ခဲ့သည်။ 5Ds. ၎င်းတို့သည် အာရုံလွှဲရန်၊ လွှဲအပ်ရန်၊ စာရွက်စာတမ်း၊ နှောင့်နှေးခြင်းနှင့် ညွှန်ကြားရန်ဖြစ်သည်။ အာရုံလွှဲရန်မှာ ပြစ်မှုကျူးလွန်သူ၏ အာရုံကို ၎င်းတို့၏ပစ်မှတ်မှ ဖယ်ထုတ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ပျောက်ဟန်ဆောင်ကာ ပစ်မှတ်ကို လမ်းညွှန်ခိုင်းခြင်း၊ ပစ်မှတ်ကို သိဟန်ဆောင်ခြင်း၊ ကျပန်းအသံကျယ်ကျယ်ဖြင့် သီဆိုခြင်း သို့မဟုတ် သိမ်မွေ့သောဗျူဟာဖြင့် ပြစ်မှုကျူးလွန်သူနှင့် ပစ်မှတ်ကြားတွင် ရပ်နေခြင်းကဲ့သို့သော နည်းလမ်းအမျိုးမျိုးဖြင့် လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ ပိတ်ဆို့ခြင်း၊” ၎င်းတို့အကြား အမြင်အာရုံကို ချိုးဖျက်ရန်။
ကိုယ်စားလှယ်လွှဲအပ်ခြင်းမှာ အာဏာပိုင်များ (ဆရာ၊ ဆရာမ၊ လုံခြုံရေးအစောင့်များ၊ အကူးအပြောင်းဝန်ထမ်းများ သို့မဟုတ် စတိုးဆိုင်ကြီးကြပ်ရေးမှူးများကဲ့သို့) အာဏာပိုင်များနှင့် လက်တွဲဝင်ရောက်စွက်ဖက်ရန် ဆန္ဒရှိမရှိ မေးမြန်းခြင်းတွင် အခြားဘေးလူများထံမှ အကူအညီရယူရန်ဖြစ်သည်။
မှတ်တမ်းတင်ရန်မှာ ကြားဝင်စွက်ဖက်ရန် ကြိုးပမ်းနေသော အခြားသူများ ရှိနေမှသာ ဖြစ်ပွားသည့် အဖြစ်အပျက်ကို ဗီဒီယို မှတ်တမ်းတင်ရန်ဖြစ်သည် (မဟုတ်ပါက အခြား 4D များထဲမှ တစ်ခုကို အသုံးပြုပါ)။ လုံခြုံသောအကွာအဝေးကို ထားရှိကာ ရိုက်ကူးသည့်အချိန်၊ ရက်စွဲနှင့် တည်နေရာကို ဖော်ပြပါ။ အခြေအနေတွေ ပိုတိုးလာတဲ့အခါ၊ ကလစ်နဲ့ ဘာလုပ်ချင်လဲ ပစ်မှတ်ကို မေးပါ။
နှောင့်နှေးရခြင်းမှာ အဖြစ်အပျက်တစ်ခုတွင် ပစ်မှတ်ထားသူတစ်ဦးနှင့် စစ်ဆေးပြီး ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည့်အတွက် ၎င်းတို့အား စာနာနားလည်ပေးပြီး ၎င်းတို့အား ပံ့ပိုးပေးရန် မည်သို့လုပ်ဆောင်နိုင်သည်ကို မေးမြန်းပါ။ ၎င်းတို့သည် တစ်ယောက်တည်းမဟုတ်ကြောင်း ၎င်းတို့အား အသိပေးရန် အရေးကြီးသည်။
ညွှန်ကြားရန်မှာ မကြာခဏဆိုသလို အခြေအနေ၏ ဘေးကင်းမှု အဆင့်များကို အကဲဖြတ်ပြီးမှသာ ပြစ်မှုကျူးလွန်သူကို ဆန့်ကျင်ပြောဆိုရန်ဖြစ်သည်။ သူတို့လုပ်နေတဲ့အရာက မတရား/မမှားဘူးဆိုတာ သိစေပြီး ပစ်မှတ်ကို တစ်ယောက်တည်း ထားခဲ့ကာ ခိုင်မာတဲ့နယ်နိမိတ်ကို တိုတိုနဲ့ တိုတိုရှင်းရှင်း သတ်မှတ်လိုက်ပါ။ ထို့နောက် သူတို့မည်ကဲ့သို့လုပ်ဆောင်နေသည်ကိုကြည့်ရန် ပစ်မှတ်ကိုအာရုံစိုက်ကာ သင်၏ဂရုစိုက်မှုနှင့် ပံ့ပိုးမှုကို အကောင်းဆုံးပြသနိုင်ပုံကို မေးပါ။
အဓိကအားဖြင့်၊ ဘေးမှဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုသည် ပစ်မှတ်ထားခံရသူ(များ)အား နှောင့်ယှက်သူ/ကျူးလွန်သူကို အကာအကွယ်ပေးကာ နှစ်သိမ့်ပေးခြင်းဖြင့် နှောင့်ယှက်သည့်ဖြစ်ရပ်တစ်ခုတွင် မိမိကိုယ်ကို ထည့်သွင်းသည့်လုပ်ရပ်ဖြစ်သည်။
အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ နမူနာ အောင်အောင်မြင်မြင် ကြားဝင်ဆောင်ရွက်ပေးမှုမှာ ဧပြီလက ယူကေတွင် အဓမ္မပြုကျင့်ခံခဲ့ရသည့် အသက် ၂၁ နှစ်အရွယ် စင်္ကာပူနိုင်ငံသား Raymond Hing ၏ အမှုဖြစ်သည်။ ဗြိတိန် YouTuber တစ်ဦးဟုသာ လူသိများသည်။ Sherwinတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်နေစဉ်အတွင်း ဧရိယာတစ်ဝိုက်တွင် စွန့်စားသွားလာနေခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုအဖြစ်အပျက်ကို သူသတိထားမိပြီး မဆိုင်းမတွ ကြားဝင်ခဲ့သည်။ Sherwin က Hing အနားကို ပြေးသွားပြီး "သူ့ကို တစ်ယောက်တည်း ထားလိုက်ပါ!" ထို့နောက် ရန်လိုသူဟိန်းကို ကိုင်မရအောင် တားသည်။ Sherwin ၏ လုပ်ရပ်ကြောင့် တိုက်ခိုက်သူသည် အခင်းဖြစ်ပွားရာနေရာမှ ထွက်ပြေးသွားခဲ့ပြီး မကြာမီ ရဲတပ်ဖွဲ့ထံ ဆက်သွယ်အကြောင်းကြားခဲ့သည်။ ရန်သူက အစကတည်းက ဓားကိုဆွဲထုတ်တဲ့အတွက် Hing ရဲ့အသက်ကို ကယ်တင်နိုင်ခဲ့တယ်။ ဟိ အသံသွင်းချက် အဆိုပါ အဖြစ်အပျက်သည် YouTube တွင် ပျံ့နှံ့သွားခဲ့ပြီး လူအများအပြားသည် အလားတူအခြေအနေမျိုးတွင် ၎င်းတို့ကိုယ်မိမိ တွေ့ရှိပါက ပိုမိုတက်ကြွစေရန် လှုံ့ဆော်ပေးခဲ့သည်။
ဘေးမှဝင်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်းအကြောင်း သင်ယူခြင်းသည် ကျွန်ုပ်အား နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်း လှုံ့ဆော်ပေးခဲ့ပြီး အထူးသဖြင့် အစ္စလာမ်ဘာသာတွင် ဟဒီးဆ်တော် သို့မဟုတ် ပရောဖက်ပြုချက်ဆိုင်ရာ သွန်သင်ချက်တစ်ခုအကြောင်း ကျွန်ုပ်အား သတိရစေသည်- “အသင်တို့အနက်မှ မည်သူမဆို မကောင်းမှုတစ်ခုကို မြင်လျှင် ထိုသူ၏လက်ဖြင့် ပြောင်းလဲစေ။ မတတ်နိုင်လျှင် လျှာဖြင့်၊ မပြုနိုင်လျှင် စိတ်နှလုံးဖြင့် ထားလော့။ ဤဟဒီးသ်တော်ရှိ “လက်” သည် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြောင်းလဲခြင်း သို့မဟုတ် မတရားမှုတစ်ခုအား ပြန်ဖျက်ရန် လုပ်ဆောင်ခြင်းအား ရည်ညွှန်းသည် (အကြမ်းမဖက်သောအခြေအနေများကို ချဉ်းကပ်ခြင်းဆိုင်ရာ ပရောဖက်ပြုချက်ပညာဖြင့်)၊ “လျှာ” သည် မတရားမှုကို ခေါ်ဆိုရန် သင့်အသံကို အသုံးပြု၍ ဆိုလိုသည်။ နှင့် "နှလုံးသား" သည် သင်၏ ရည်ရွယ်ချက်ကို ရည်ညွှန်းပြီး ၎င်းကို သင်ယူပြီး ပိုကောင်းအောင်ကြိုးစားရန် သတိပေးချက်အဖြစ် (သင်ဝင်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်းမပြုသော ဘေးမှ သက်သေခံတစ်ဦးသာဖြစ်လျှင်ပင်) ဖြစ်ပျက်မှုကို ခံယူခြင်းလည်း ပါဝင်မည်ဖြစ်သည်။
Excellence, သို့မဟုတ် "ehsan" သည် သုံးခုစလုံးကို သဟဇာတဖြစ်အောင် ဆောင်ရွက်ခြင်း။ မတရားမှု၊ ရည်ရွယ်ချက် သို့မဟုတ် "နိယာ" ကို ဆန့်ကျင်သည့်အချိန်တွင် ရပ်တည်ခြင်းသည် ဂုဏ်ကျက်သရေ သို့မဟုတ် သူရဲကောင်းဆန်ခြင်းထက် မှားယွင်းခြင်း/ဖိနှိပ်ခံနေရသူများအား ဗဟိုပြုသင့်သောကြောင့်၊ အခြားသော ဟဒီးဆ်တော်အားဖြင့် ဤသို့သတိပေးသည်– “အကျင့်၏အကျိုးသည် ရည်ရွယ်ချက်အပေါ်မူတည်၍ လူတိုင်းသည် မိမိရည်ရွယ်ထားသည့်အတိုင်း ဆုလာဘ်ကို ရရှိကြလိမ့်မည်” ဟူ၍ဖြစ်သည်။
နောက်ဆုံးတွင် အခြားသူများလုပ်သောအရာသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ထိန်းချုပ်မှုမှလွဲ၍ ကျန်ရှိနေနိုင်သော်လည်း ကျွန်ုပ်တို့တုံ့ပြန်ရန်ရွေးချယ်ပုံမှာ ကျွန်ုပ်တို့၏စွမ်းရည်တွင် အလွန်ကောင်းမွန်ပါသည်။ ယုံကြည်ခြင်းကျင့်ထုံးများနှင့် နေ့စဉ်အသက်တာကြားတွင် ပဋိပက္ခ သို့မဟုတ် အဆက်အစပ်မရှိပေ။ ဂျီဟတ်၏ လုပ်ရပ်သည် နေ့စဉ်နှင့်အမျှ တည်ရှိနေသည်- အလုပ်သွားခြင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့၏လေ့လာမှုများ တိုးမြှင့်ခြင်း၊ ကျန်းမာသောမိသားစုကို ဖန်တီးခြင်းနှင့် ဘေးကင်းသော ကြားဝင်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းတို့ပင် ဖြစ်သည်။ ဤလုပ်ဆောင်ချက်များအားလုံးတွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့နှင့် ကျွန်ုပ်တို့ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ အခြားသူများ၏ဘဝအရည်အသွေးကို မြှင့်တင်ရန် ကြိုးပမ်းနိုင်သည်။ ဤသွန်သင်ချက်များအရ အနောက်တိုင်းမီဒီယာများတွင် လွဲမှားစွာဖော်ပြမှုများနှင့်ဆန့်ကျင်ဘက်၊ ကျွန်ုပ်၏ဘာသာရေးထုံးတမ်းစဉ်လာတွင် အမုန်းတရားများကို တန်ပြန်ရန်နှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးတည်ဆောက်ပုံနှင့်ပတ်သက်၍ ဝေငှရန် ပညာများစွာရှိသည်။
Olga Vorkunova, Exec ၏မှတ်ဉာဏ်တွင်။ IPRA ငြိမ်းချမ်းရေး ပညာရေးကော်မရှင် အတွင်းရေးမှူး
ဒီဇင်ဘာလတွင် 15, 2014 အင်္ဂါရပ်များ 0
KwaZulu-Natal မှ Vaughn John တက္ကသိုလ်, တောင်အာဖရိက (အထူးဆောင်းပါး - ၂၀၁၄ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၄၊ တောင်အာဖရိကနယ်လ်ဆင်မန်ဒဲလားကွယ်လွန်ခြင်း၏နှစ်ပတ်လည်နေ့ကိုကျွန်ုပ်တို့ချဉ်းကပ်စဉ်တွင်ဤအပိုင်းကိုကျွန်ုပ်ရေးသည်။ [ဆက်ဖတ်ရန် ... ]
နိုဝင်ဘာလ 13, 2021 CV 0